onlineakhabar.com: मरेको यार्सागुम्बा देख्नुभएको होला तर जिउँदो यार्सागुम्बा देख्नुभएको छ ? भिडियो हेर्नुहोस्
Amazing Nepal, Amazing Video, Main News, Manang News, Nepali News, Video, Viral Video, Yarchagumba » मरेको यार्सागुम्बा देख्नुभएको होला तर जिउँदो यार्सागुम्बा देख्नुभएको छ ? भिडियो हेर्नुहोस्
मरेको यार्सागुम्बा देख्नुभएको होला तर जिउँदो यार्सागुम्बा देख्नुभएको छ ? भिडियो हेर्नुहोस्
हिमाली भेगमा पाइने यार्सागुम्बा निकै महंगो जडिबुटी अन्तर्गत पर्दछ । राम्रो यार्सागुम्बा एउटा किराको नेपाली दुई सय रुपैया देखि सात सय सम्म पर्ने यार्सा एक केजीको चालिस लाख सम्ममा बिक्रिहुने गर्दछ । यसको मुल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने यार्सागुम्बा टिप्न जानेहरुका अनुसार पहिले जस्तो पाउन मुस्किल भएको बताउँछन् । यो टिप्न जाने महिना भनेको बैशाख देखी श्रावणसम्म हुन्छ । जुन समयमा हिमाली भेगका मानिसहरु यार्सा टिप्नको लागि गाउँनै खाली गरेर निकै माथी माथीका लेकहरुमा पुग्ने गर्दछन् । यार्सागुम्बा एक किसिमको अाधा बनस्पती र अाधा किराको रुपमा देखिने गर्दछ ।
हामीले सामान्यतय गुगलमा या कुनै समाचारहरुमा पनि यार्सागुम्बाको फोटोहरु देखिरहने गर्दछौ । तर जिउँदो यार्सा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हिमाली भेगका मानिसहरु बाहेकका लागि निकै रहस्यमय हुने गर्दछ । यहाँ मनाङका एक व्यक्ति यार्सागुम्बाका लागि जमिन खन्नेक्रममा जिउँदो यार्सागुम्बा भेट्टाएका छन् । जुनकुरालाई उनले आफ्नो मोबाइलको क्यामरामा कैद गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो जिउँदो यार्सागुम्बा कस्तो हुन्छ :
Tags : Amazing Nepal Amazing Video Main News Manang News Nepali News Video Viral Video Yarchagumba